ကောင်းမွန်တဲ့ အပြောင်းအလဲ အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား – Be ready for better changes | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကောင်းမွန်တဲ့ အပြောင်းအလဲ အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား – Be ready for better changes
ကောင်းမွန်တဲ့ အပြောင်းအလဲ အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား – Be ready for better changes
Posted by ဇီဇီ on Nov 10, 2015 in Creative Writing, Cultures, Politics, Issues, Society & Lifestyle | 28 comments
ဘဝမှာ အသက် ၂၅ ကနေ ခု ၃၅ အထိ ၁၀ နှစ် အတွင်း အပျော်ဆုံး အချိန်ကာလ၊ စိတ်အလှုပ်ရှားဆုံး အချိန်ကာလပါပဲ။
ဒီ အပြောင်းအလဲ အတွက် ဘာတွေကို ကျေးဇူးတင်ရမလဲ ဘယ်သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ရမလဲ စဉ်းစားကြည့်လိုက်မိတော့..
၁) ၁၉၈၈ ကနေ ၂၀၁၅ အထိ အသက်အန္တရယ် အသွယ်သွယ်ကြားက မလွဲမဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်နဲ့ ကျနော်တို့ကို စေတနာထားခဲ့တဲ့ DASSK
၂) အခုလို ရေးခွင့်ပြောခွင့်ရ လွတ်လပ်မှုတွေကို အနုနည်းရော အကြမ်းနည်းရောနဲ့ အသက်နဲ့ ရင်းပြီးးးတိုက်ယူပေးခဲ့တဲ့ အကျဉ်းစံ အကိုအမတွေ…
၃) ၁၉၈၈ ကနေ ၂၀၁၅ အထိ ဘယ်လောက်နိမ့်ကျတဲ့ အခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ် ဒီချုပ်ကို ယုံယုံကြည်ကြည်လက်တွဲခဲ့တဲ့ ဘဘ တို့နဲ့ တကွ ပါတီဝင်များ
၄) ဒီ ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း ဒီချုပ် ဦးဆောင်မှုကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုချပြ ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေ
၅) နိုင်တဲ့နယ်ကပဲဖြစ်ဖြစ် ရှုံးတဲ့နယ်ကပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီချုပ်ကို ယုံကြည်မှုထားပြီး ပေးခဲ့တဲ့ မဲဆန္ဒရှင်တွေ အကုန်လုံး
၆) ရွေးကောက်ပွဲမှာ လူမသိသူမသိနေရာပေါင်းစုံမှ တရားမျှတမှုအတွက် ကူညီခဲ့ကြသူတွေ၊ ဝန်ထမ်းတွေအားလုံး
၇) စိတ်ရောလူရော အားစိုက် ဝန်းရံပေးခဲ့သူ အားလုံးး ကို
ကျနော် ပင်ကိုယ်စိတ်အတိုင်းဆို ကိုယ် နေသာရင် ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ သမားမို့ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဂျိုနဲ့လား ဆိုတဲ့ အမြင်ရှိခဲ့သူပါ။
ဒါပေမဲ့ မိဘနဲ့ ဆရာ အသိုင်းအဝိုင်းကြောင့်သာ သမိုင်းဖြစ်ရပ်တွေကို မျက်ခြေမပြတ်ခဲ့မိရတာ။
သူများနိုင်ငံရောက်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်နိုင်ငံဆီ နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်မိမှ ကွာခြားချက် အများကြီးနဲ့ နောက်ကျန်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံအတွက် အားမလိုအားမရဖြစ်ရာက ဘယ်လိုမှ မနေသာတော့တာပဲ….
မြန်မာပြည်ကို ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံလို့ မြင်တဲ့သူနဲ့၊ ဘယ်နားတုန်း မေးသူနဲ့ ဆိုတော့ ..
အင်မတန်နေသာခဲ့တဲ့ မိန်းမ မနေတတ်တော့တာ။
အခုအချိန်ဟာ ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့ အစ ပါ။
မြန်မာပြည်ဟာ အစိုးရကောင်းနဲ့ တန်ပါတယ်၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ တန်ပါတယ် ဆိုတာ ပြကြရအောင်ပါ။
အမေစု ပြောခဲ့သလို ကိုယ့် တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ သဘောထားလေးတွေ အရင် ပြောင်းလဲကြရအောင်….!!!
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အရာရာတိုင်း အတွက် တာဝန်ယူတတ်တဲ့ အစိုးရတစ်ရပ် က လာတော့မှာလေ။ ကိုယ်တိုင်လေး ပြောင်းလဲထားတဲ့ အချိန်မှာ အကြီးအမား အပြောင်းအလဲအတွက် အလိုက်သင့်ပါသွားနိုင်အောင်ပေါ့။
၁) အမှိုက်၊ ကွမ်းတံတွေး စည်းမဲ့ ကမ်းမဲ့ စွန့်ပစ်တာတွေ ကိုယ်တိုင်လည်း ဆင်ခြင်၊ အချင်းချင်းလည်း သတိပေးကြရအောင်
၂) စာဖတ်မယ်၊ ကောင်းမွန်တဲ့ ဗဟုသုတကို နီးစပ်ရာဖြန့်ဝေကြရအောင်။
၃) အာဃာတ တရားတွေ လျှော့မယ်၊ အရာရာ အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ နားလည်ပေးရအောင်
၄) အမုန်းတရားမပါတဲ့ စကားတွေပဲ ပြောဆိုနိုင်အောင် ကြိုးစားရအောင်
၅) ရှိထားတဲ့ ဥပဒေတွေကို လိုက်နာတတ်တဲ့၊ အချောင်ရလိုစိတ်မရှိတဲ့ နိုင်ငံကြီးသားဖြစ်ဖို့ အချင်းချင်းတိုက်တွန်းကြရအောင်
အရမ်းအများကြီး ပြောင်းစရာ လိုတာ မဟုတ်ပါဘူးး
ကိုယ့် အတွက် ကိုယ် တာဝန်ယူတာက အစ …
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် အတွက် စပြီး ပြောင်းရအောင်ပါ။
ဒီ အပြောင်းအလဲဟာ နောက် ၆ လလောက် အထိ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဖြစ်မှ အကောင်းဘက်ကို ဦးတည်မှာမို့
ကောင်းမွန်တဲ့ အပြောင်းအလဲကို လိုလားကြရင်ဖြင့်
ဘယ်လောက် ထောင်ချောက်ဆင်ဆင် မဝင်မိစေပဲ၊ ညာဏ်ကြီးကြီး သတိကြီးကြီးနဲ့သာ ကျော်လွှားပေးပါလို့ တောင်းပန်ချင်တာပါ။
တိုင်းပြည် ဆူပူအောင် မျှော်လင့်နေသူတွေ
မီးပွါးချနေသူတွေဟာ ဘယ်သူတွေတုန်းဆိုတာ ထင်ထင်ရှားရှားသိနိုင်တော့မှာမို့ပါ။
ပြည်သူ့ လက်ထဲ ရောက်ရမဲ့ အချုပ်အချာအာဏာဟာ ပြည်သူတွေ သတိ တစ်ချက်လစ်လို့ အာဏာရှင်လက်ပြန်ရောက်သွားရင် နှမြောစရာကြီးဗျာ။
Credit to Ye Min Win
“ရွေးကောက်ပွဲ အပြီး (၃) လ အတွင်းမှာ ပြည်သူ တွေ ကြံ့ကြံ့ခံ ပြီးနေကြပါ”
ရွေးကောက်ပွဲ အပြီးမှာ NLD landslide နိုင်ရင် ဆူပူအုံကြွမှုတွေ ဖြစ်မယ် လို့ အစိုးရရဲ့ PR လုပ်နေတဲ့ Larry Gargan ကလည်းပြောပါတယ်။ သမ္မတကိုယ်တိုင် ကလည်း သူ့ပါတီရှုံးရင် သွေးထွက်သံယိုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သတိပေးတာလိုလို ခြိမ်းခြောက်တာလိုလို ပြောပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အစီ အမံတွေကတော့…
၁။ NLD ထောက်ခံ အားပေးသူတွေ အောင်ပွဲခံတဲ့ အချိန်မှာ ရန်ပွဲတွေ ဖြစ်အောင် ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။
၂။ မဘသအဖွဲ့ဝင်တွေက အနိုင်ရ NLD ကိုယ်စားလှယ်ကို ဆန့်ကျင် ဆန္ဒ ပြပါလိမ့်မယ်။
၃။ သူတို့ရဲ့လူ မူစလင်ဘာသာဝင်များက NLD အယောင်ဆောင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပုတ်ခတ် ပြောပါလိမ့်မယ်။
၄။ ဘယ်တော့မှ မရိုးတဲ့ ကုလား-ဗမာ အဓိကရုဏ်း တစ်ခု ထပ်ပြီး ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။
၅။ အနိုင်ရရှိတဲ့ NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ပုဒ်မ အမျိုးမျိုး တပ်ပြီး ဖမ်းဆီးဖို့ ကြိုးစား ပါလိမ့်မယ်။
၆။ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ရုံးတွေ ၊ ဆိုင်းဘုတ်တွေကို သူ့လူ ကိုယ့်ဘက်သား လုပ်ပြီး ဖျက်ဆီးကြလိမ့်မယ်။
၇။ ကုန်ဈေးနှုန်း ကြီးသွားအောင်၊ လူတွေ စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းအောင် ဖန်တီးကြလိမ့်မယ်။
၈။ သောင်းကျန်းသူ အယောင်ဆောင်ပြီး လူစု လူဝေးများတယ့်နေရာတွေမှာ ဗုံးတွေ ခွဲပြလိမ့်မယ်။
NLD ထောက်ခံသူများ ကျေးဇူးပြု၍ သူတို့ရဲ့ လှည့်ကွက်ထဲ မဝင်မိပါစေနဲ့။ လမ်းပေါ် ထွက်ပြီး အလွန်အကျူး အေင်ပွဲခံတာ မလုပ်ပါနဲ့။ အောင်နိုင်ရေး ရုံးရှေ့ အရောက်လာပြီး ဆဲဆိုတာတွေ ခံရလိမ်မယ်၊ဘာမှ မတုန့်ပြန်ပါနဲ့။
ရွေးကောက်ပွဲ အပြီး ၃လ ကြာ ၂၀၁၆ မတ်လထဲ ရောက်မှ အာဏာလွှဲပြောင်း ပေးအပ်မှာပါ။ ဒီကြားထဲ မှာ လူထု အုံကြွမှု မဖြစ်ဖြစ်အောင် နည်းအမျိုးမျိုး နဲ့ လုပ်ပြီး အာဏာသိမ်းဖို့ ကြံစည် ပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးဟာ ဘယ်သော အခါမှ သမားရိုးကျ မဖြစ် ဖူးပါဘူး။
ဒီ (၃) လ အတွင်း မှာ ကြံ့ကြံ့ခံ ပြီးနေကြပါ။
ဖွဘုတ်အတွက် အော်တိုရှယ် ပိတ်ထားဒါလားး
ဒီမှာက ကော်မန့်တွေ ရှိနေပြီဆိုတော့။
မနေ့က ကျုပ်ဖွဘုတ်.. ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်Hack ဖို့ကြိုးစားတယ်မသိ.. ဖွဘုတ်ဆီကမေးလ်လာပြီး ပိတ်ပလိုက်တယ်..။
ဖုံးနံပါတ်တွေထည့်.. ပါတ်စ်ဝပ်တွေပြင်နဲ့.. ဒီညနေမှပြန်ရတာ..။
အရင်လ ကတည်းက စိတ်ပူခဲ့ရတဲ့ ပူပန်မှုတွေက အိပ်မက်လိုပဲ
မဲဆွယ်ပွဲ…မဲရွေးပွဲတွေမှာ.. ဒီဆယ်စုနှစ်ပိုင်းထဲ.. မမှားဖူးသေးဘူး..။
ယူအက်စ်ရွေးကောက်ပွဲဆို.. လောင်းကြေးရှိသမို့.. ပိုက်ပိုက်တွေပါရ..။
အပေါ်မှာ.. ၇၇က်နေ့တုံးက..ကျုပ်မှန်းထားတာ.. အဲလို..။
သမ္မတရွေးပွဲလာပါပြီ..။ မြန်မာ့အခြေခံဥပဒေအရ..သမ္မတကို… လူထုကတိုက်ရိုက်တင်မြောက်ခြင်းမဟုတ်.. လူထုကိုယ်စားလှယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကရွေးကောက်တင်မြောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်…။
၁။ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်ကရွေးတဲ့.. ဒုသမ္မတ…၁ယောက်..။
၂။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကရွေးတဲ့.. ဒုသမ္မတ…၁ယောက်..။ (အမေရိကားမှာဆို.. House of Representatives တွေရဲ့ အောက်လွှတ်တော်)
၃။ အမျိုးသားလွှတ်တော်က..ရွေးတဲ့.. ဒုသမ္မတ…၁ယောက်..။ (အမေရိကားမှာဆို.. Senate, အထက်လွှတ်တော်)
၁။ အဖွဲ့ချုပ် NLD က… ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ..(တပ်ကိုယ်စားလှယ်မပါ) ၅၁%အထက် ( စုစုပေါင်း ၃၃၀ ရဲ့ ၁၆၆ယောက်) ရှိနေရင် ဒုသမ္မတ…၁ယောက်..တင်ပေးလို့ရမယ်..။
၂။ အဖွဲ့ချုပ်က…အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ..(တပ်ကိုယ်စားလှယ်မပါ) ၅၁%အထက်( စုစုပေါင်း ၁၆၈ရဲ့ ၈၅ယောက်) ရှိနေရင် ဒုသမ္မတ…၁ယောက်..တင်ပေးလို့ရမယ်..။
၃။ တပ်ကတော့ …အော်တိုမစ်တစ်…ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း ၁၆၆ နဲ့ ဒုသမ္မတတယောက်တင်မယ်..။
အဲဒီ ၃ယောက်ထဲကမှ… ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ခေါ်တဲ့.. ပြည်သူ့+အမျိုးသား+တပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေက… သမ္မတတယောက်ကို မဲပေးတင်ရမယ်..။
အမတ်စုစုပေါင်း ၆၆၃ယောက်မှာ ၃၃၃ယောက်(အနည်းဆုံး)ရှိတဲ့ NLD ကရွေးခွင့်ရမယ်။
အဲဒီသမ္မတက… အစိုးရကက်ဘိနက်(၀န်ကြီးအဖွဲ့) ဖွဲ့ခွင့်ရမယ်..။
ယူအက်စ်မှာလည်း.. အခုလိုနိုဝင်ဘာပထမပါတ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရင်.. သမ္မတကျမ်းကျိန်တာ ဇန်န၀ါရီ ၂၀/၂၁ ရက်နေ့..။
ဟိုးးးးအရင် အခြေခံဥပဒေမပြင်ခင်ကဆို.. မတ်လ ၄ရက်နေ့တဲ့..။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက.. အာဏာလွှဲနိုင်ရင်.. မတ်လကုန်လောက်လို့မှတ်မိတယ်..။
အာ့ကြောင့် ၆ လ လောက်တော့ စိတ်အေးအေးထားမှ ဖြစ်မယ်။
အနိုင်ရ NLDပါတီ၏ သမ္မတတင်မြှောက်ခွင့်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့ခွင့် အာဏာ
ပြည်ေ်ထာင်စုလွှတ်တော်တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း ၆၆၄ နေရာရှိပါတယ်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် အရပ်သားနှင့်တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၄ ဦးရှိပါသည်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်က ဒုတိယသမ္မတ ၁ ဦး တင်မြှောက်ရပါမည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် အရပ်သားနှင့်တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၄၄၀ ရှိပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ဒုတိယသမ္မတ ၁ ဦး တင်မြှောက် ရပါမည်။
တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ၁၁၀ ဦး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ၅၆ ဦး စုစုပေါင်း ၁၆၆ ဦးရှိပါသည်။ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ဒုတိသမ္မတ ၁ ဦးတင်မြှောက် ရပါမည်။
ဒုတိယသမ္မတ ၃ ဦးထဲမှ သမ္မတ ၁ ဦးကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်အမတ်အရေအတွက် ၆၆၄ တွင် အနည်ဆုံး ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် အမတ်အရေအတွက် ၃၃၃ ဦး ပိုင်ဆိုင်ထားသော နိုင်ငံရေးပါတီက မိမိတင်မြှောက်လိုသူကို သမ္မတ တင်ခြင်းဖြင့် သမ္မတ တင်မြှောက်နိုင်သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်/တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းခွင့်ရှိသည်။
လတ်တလော NLD ပါတီသည် လွှတ်တော်အမတ်နေရာ ၃၃၃ ဦးကျော် အနိုင်ရရှိထား၍ သမ္မတတင်မြှောက်ခွင့်နှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခွင့် ရရှိထားပြီဖြစ်သည်။
ဒီ အခွင့်အရေးကို သတိလက်လွတ် နဲ့ အဆုံးအရှုံးမခံနိုင်တာပါပဲဗျာ။
Aung San Suu Kyi’s party claims landslide victory
Nov. 10, 2015 – Updated 10:41 UTC-8
Myanmar’s main opposition party led by Aung San Suu Kyi says it scoredalandslide victory in the general election held on Sunday.
Officials of the country’s election commission say 121 seats, or about 25 percent of those contested, have been officially declared.
The opposition National League for Democracy won 107, while the military-backed ruling Union Solidarity and Development Party won only 7.
The remaining7went to ethnic minority parties and independents.
The NLD says its own vote count gives the party 294 of the 360 seats it has assessed so far.
The party’s number2official, Tin Oo, told reporters on Tuesday that the NLD had won 81 percent of the seats nationwide.
အာ့ဆို လည်းး ရွာထဲ တင်ထားးတဲ့ သန်းးမဂျီးး poll ကို ဖြုတ်ပေးးဘာာာာ..
အဲ့ ဒီ အစားး အနော်တို့ အမေ ဘယ်သူ့ ကို သမ္မတ တင် မလဲ ဆိုတာ လောင်းကြေးးဖွင့်ရအောင် ???
သဘောတူပါတယ် ဒီအဆိုကို NLD ကရွေးမဲ့ သမ္မတကိုပဲ ရင်ခုန်ပါရစေတော့
ခန့်မှန်းကြည့်ချင်လို့ပါ poll အသစ်တင်ပေးပါ
ကျွန်တော် မဲဆွယ်ကာလ မှာ ရေးခဲ့ တဲ့ မေးခွန်း၊အဖြေ လေးတွေ နဲ့ အားလုံးကိုသတိပေးပရစေ။
မေး ။NLD အာဏာ ရခဲ့ရင် NLD ကို အားမပေး မထောက်ခံ ခဲ့တဲ့ လူတွေ၊ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ လူတွေ ၊ဆဲဆို ကြိမ်းမောင်းခဲ့တဲ့ လူတွေ၊ မတရား ထောင်ချ ခဲ့တဲ့ လူတွေ ကို ဘယ်လို ဆက်ဆံ မလဲ။
ဖြေ။ အားပေး ထောက်ခံ တဲ့ လူတွေ နဲ့ တန်းတူ ပဲ ဆက်ဆံ မှာပါ။
မေး။ NLD အာဏာ ရခဲ့ရင် အခု အချိန် မှာ အားပေး ထောက်ခံ တဲ့ လူတွေ ကို ဘယ်လို ဆက်ဆံ မလဲ။
ဖြေ။ အားမပေး မထောက်ခံ တဲ့ လူတွေ နဲ့ တန်းတူ ပဲ ဆက်ဆံ မှာပါ။ ဘယ်လို အခွင့်အရေး မျိုးမှ ပိုပေး မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အခြား ပါတီ ထောက်ခံ သူများ ကို လုံးဝ လှောင်ပြောင် ပြောဆိုခြင်း၊ နှိမ်ချ ပြောဆိုခြင်းများ မလုပ်မိကြပါစေနဲ့။ဒေါင်းတို့ရဲ့ သဘောထား ကြီးမြတ်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ် မြင့်မားခြင်း၊ ခွင့်လွှတ် သည်းခံ ခြင်း၊ သင်ပုန်းချေ နိုင်ခြင်း ဂုဏ် ကိုပြကြပါ။ မိမိ တို့ မြို့နယ် မှာ မိမိ ကို မထောက်ခံသူ ရှိနေသေးတာ မိမိတို့ ပါတီ ရဲ့ အားနည်းချက် ပဲလို့ မှတ်ယူပြီး ထို လူနည်းစု ရဲ့သဘောထားကို အလေးထားပေးပါ။သူတို့အသံ နားထောင်ပေးပါ။
နိုင်ငံတော် အသစ် ကြီး ပေါ်ပေါက် လာပါတော့မယ်။ နိုင်ငံသား အားလုံး အတူတူ ခေါင်းဆောင် ကောင်းရဲ့ အောက်ကနေ အတူတူ ချီတက်နိုင်ဖို့ အတွက် အမုန်းပွားစေတဲ့ စကား၊ discrimination ဖြစ်စေတဲ့ စကား၊ prejudice ဖြစ်စေတဲ့ စကားများ ပြောကြား ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ကြပါ။
ကျွန်တော် တို့ဟာ ကြီးမြတ် တဲ့ ဒေါင်းမိခင် က မွေးဖွားတဲ့ ကြီးမြတ်တဲ့ ဒေါင်းများ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Credit Ye Min Win
မကြာခင်မှာ နိုင်ငံတကာ အကူအညီဆိုပြီး ပထမဆုံး ရောက်လာမှာက What is democracy ဆိုတာကို သင်ကြားပေးမယ့် အကူအညီတွေပါပဲ..။
အမေရိကား ကလဲ လာမယ်..
ဒီမိုကရေစီ သင်ပုန်းကြီး ကနေ ပါရဂူ မြောက်တဲ့ အထိ သင်ပေးကြလိမ့်မယ်..။ သူတို့ အားလုံး မှာ တူညီတဲ့ ပေတံတစ်ခုပါလာလိမ့်မယ်..။ အဲဒီပေတံရဲ့ နာမည်က Diversity.
ဒုတိယ ရောက်လာမှာက SME Support ။ ဒါဟာ ဒီနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် မရှိမဖြစ် ဆိုတာ အားလုံးသိကြပါတယ်..။
ကျွန်တော်တို့မှာ လိုနေတဲ့ Technology တွေ business contact တွေ International business တို့ International trade တို့ Marketing Strategy တို့ကို လာပြီး သင်ပေးကြပါလိမ့်မယ်..။ တပြိုင်တည်းမှာပဲ တစ်ဖက်တစ်လမ်းက Venture Capital တွေ ရလာပါလိမ့်မယ်..။
ဘယ်လို ရလာမလဲတော့ မမေးကြပါနဲ့ဦး..။ တနည်းနည်းနဲ့ ရလာမှာပါ..။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို ဖွံ့ဖြိုး စေတာဟာ SME ပါ..။ အဲဒီကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ ဆိုတာကလဲ မြေအရောင်းအဝယ် လုပ်နေရုံနဲ့ မရပါဘူး..။ လုပ်ခဲ့ကြပြီးပါပြီ..။ ချမ်းလဲ ချမ်းသာကုန်ကြပါပြီ..။
ဒါပေမယ့် အတတ်ပညာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အားနည်းခဲ့ကြပါတယ်..။ အခုအချိန်အထိ မြေအရောင်းအဝယ်နဲ့ ပိုက်ဆံချမ်းသာ သွားကြသူတွေ အများစုကို “အခြေအနေဘယ်လိုလဲ” လို့ အလုပ်အကိုင် ဖွံ့ဖြိုးမှု ကို မေးကြည့်ရင် “ ဒီလိုပါပဲ” လို့ ဖြေနေကြတုန်းပါ..။ သူတို့ မြေရောင်းမြေဝယ်လုပ်လိုက်လို့ ချမ်းသာသွားတဲ့ ပိုက်ဆံငွေကြေးတွေနဲ့ ဘာစက်ရုံ ဘာအလုပ်ရုံတွေ ထူထောင်ပြီး ဘာတွေထုတ်လုပ်လို့ လုပ်အားရှင် ဘယ်နှစ်ယောက်ကို အလုပ်ပေးထားနိုင်ပြီလို့ ခေါင်းမော့ ဝင့်ကြွားနိုင်သူ သိပ်များများ မရှိသေးပါဘူး.။
အဲဒါကို ဖွံ့ ဖြိုးပါတယ် လို့ ဘယ်လိုမှ မပြောနိုင်ပါဘူး..။
မဝေးလှတော့တဲ့ အနာဂါတ်မှာတော့ အလုပ်တကယ် လုပ်ကြဖို့ လိုပါပြီ..။ အရင်းအနှီးကို သေသေချာချာ စိုက်ထုတ် ရင်းနှီးရပါမယ်..။ နည်းပညာကို မြှင့်တင်ရပါမယ်..။ သင်ယူဖို့လိုရင် ရပ်ဝေးမြေခြားအထိ ပို့လွှတ် သင်ကြားနိုင်ရမှာဖြစ်သလို ပညာရှင် ခေါ်ယူပြီး သင်ပေးစေတာမျိုးလဲ လုပ်ရတော့မှာပါ..။
သယံဇာတကို ကုန်ချောလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အကြီးအကျယ်ကို ပြောင်းလဲမှ ရတော့မှာပါ..။ ဥပမာ ရွှေတွင်းက ထွက်လာတဲ့ ရွှေရိုင်းကို သန့်စင်လှော်ချွတ်တဲ့ အခါ သမားရိုးကျ နည်းလမ်းတွေ နဲ့ ဆက်လုပ်နေဦးမယ် ဆိုရင် နေခဲ့တော့..။
အလားတူပဲ ကျောက်တွင်းက ထွက်တဲ့ ကျောက်ရိုင်းကို တော်ရုံသွေးပြီး လုံးချော အဖြစ်ပဲရောင်းမယ်ဆိုရင် လဲ နေခဲ့တော့..။ ကိုယ်က အရိုင်း ရောင်းပြီး Land Cruiser စီးနေချိန်မှာ ကိုယ့်ဆီက အရိုင်းကို ဈေးကောင်း (ဟုထင်ရ) ပေးပြီး ဝယ်သွားသူက နည်းပညာနဲ့ ဖွင့်လိုက် မြှင့်လိုက်တော့ လေယာဉ် ဝယ်စီးနိုင်သွားပါလေရော..။
ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ ကုန်ချော (များများ) ထုတ်လုပ်တဲ့ နည်းပညာလိုနေတာပါ..။ သယံဇာတ က ထွက်နေသေးတော့ ကုန်ချောထက် ကုန်ကြမ်းက ရောင်းလို့ပိုမြန်တယ်..။ ဝယ်သူများကလဲ ကုန်ချောဘဝမရောက်ခင် လာဝယ်ကြတယ်..။ ဒါမှ သူတို့ အမြတ်များများစားရမှာလေ..။ ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်စိုက်တဲ့ ပဲကိုတောင် အခွံကောင်းကောင်း မချွတ်နိုင်သေးဘူး..။ အခွံပါတဲ့ ပဲနဲ့ အခွံချွတ်ပြီး အဖျင်းအမှော် ကင်းတဲ့ ပဲ …. ဈေးခြင်း မတူတာကိုလဲ ကောင်းကောင်း သိတယ်.. ဒါပေမယ့် မလုပ်တာ..။
ပဲဆီသန့် .. နှမ်းဆီသန့်.. ဟင်းရွက်ဆီသန့်.. ပြောင်းဖူးဆီသန့်.. ကောင်းကောင်းကြီး ထွက်နိုင်ပါရက်နဲ့ အရောအနှော လုပ်တဲ့နည်း..။ အတုကို အစစ်နဲ့ တူအောင် လုပ်တဲ့ နည်းကိုပဲ စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်..။ ငါးပိ ငါးခြောက် export တင်ပို့လို့ရအောင် ထွက်ပါရက်နဲ့ တာရှည်ခံအောင် နည်းပညာမသုံးပဲ.. အလွယ်တကူ ပိုးသတ်ဆေး ဖြန်းချင်ကြတယ်..။ ဒါတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်တွေ မဟုတ်ဘူးလားဗျာ..။
အိန္ဒိယမှာ ဆနွင်းမှုန့်တစ်မယ်ထဲထုတ်လုပ်ရောင်းချပြီး ချမ်းသာနေသူတွေ ရှိတယ်..။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဆနွင်းတက်ကို မီးရှို့ နေကြတုန်း..။ ကျွန်တေ်ာတို့ စိုက်တဲ့ ကြက်သွန်ကို အလုံးလိုက်အိတ်သွတ်ပြီး သူများပေးတဲ့ ဈေးနဲ့ ရောင်းနေတုန်း..။ ကြက်သွန်ပေါတဲ့ ရာသီမှာ ပါးပါးလှီး.. အခြောက်ခံ ပြုပြင်ပြီး နိုင်ငံခြား ပို့မယ့်အစား ဂိုဒေါင်ထဲမှာ အညှောင့်ထွက်အောင် ပုပ်အောင် ထားနေတုန်း..။ အဲဒီ နှစ်မယ် (ကြက်သွန်နဲ့ ဆနွင်း) နဲ့တင် ချမ်းသာနိုင်တယ်..။
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ အစိုးရက ကာကွယ်ပေးမှ ရမယ်..။ အိန္ဒိယ မှာ ဗာရာဏသီ ဟာ ပိုးထည် (ဆာရီ) အများဆုံး ထုတ်လုပ်ပါတယ်..။ အဲဒီ ဆာရီဟာလဲ အိန္ဒိယသူတွေ အတွက် မရှိမဖြစ်ပါ..။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဆာရီတွေကို China ကနေ အလုံးအရင်း နဲ့ တင်သွင်းလာတော့ နောက်ဆုံးမှာ ဗာရာဏသီက ပိုးထည် ဆာရီလုပ်ငန်းတွေ ရပ်သွားခဲ့ဖူးတယ်..။
ဒါနဲ့ အစိုးရက ပေါ်လစီချမှတ်ပြီးကာကွယ်ပေးခဲ့ရဖူးတယ်..။ ကိုယ့်ဆီက အထည်အလိပ် နဲ့ ရိုးရာ အထည်တွေ ရဲ့ ရပ်တည်မှုကိုလဲ အဲဒီနည်းလမ်းနဲ့ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်..။ တစ်ဖက်မှာ လုပ်ငန်းရှင်တွေဖက်ကလဲ Innovation ရှိလာအောင် လုပ်ဖို့ အမြဲဆန်းသစ် နေဖို့တော့ လိုတာပေါ့..။ တစ်ယောက်က ရှေ့က ဆန်းသစ် .. နောက်ကတစ်ယောက်က နောက်က လိုက်ပြီး ပုံတူ လုပ် ဆိုတာတွေကိုလဲ ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်ပေးရမှာပါ..။ လုပ်ငန်းတူ ခြင်း နာမည် ဆင်တူ မဖြစ်စေရေး.. လုပ်ငန်း အမှတ်တံဆိပ် ဆင်တူရိုးမှား မဖြစ်စေရေးတို့ကိုလဲ စောင့်ရှောက် ကာကွယ်ပေးဖို့ကတော့ အစိုးရရဲ့ တာဝန်ပါ..။
မြန်မာ့ အထည်အလိပ်ဈေးကွက်ဟာ တော်တော်ကို ကျဉ်းနေပါသေးတယ်..။ မြန်မာပြည်ကနေ ပြည်ပကို ခရီးသွားတိုင်း မြန်မာဖြစ် အထည်တွေ ဟာ လက်ဆောင်ပေး ရတာ သိပ်ကို မျက်နှာပန်းလှပါတယ်..။ ကချင်လွယ်အိတ်တို့ ပုဆိုး တို့ တိုက်ပုံ အင်္ကျီ တို့.. အမျိုးသမီး ထဘီ ရောင်စုံ တို့ ဆိုရင် သိပ်နှစ်သက်ကြပါတယ်..။ တကယ်တော့ ပြည်တွင်း ဈေးကွက်မှာ ဆယ်ဒေါ်လာ လောက်နဲ့ ညီမျှတဲ့ ငွေကြေးနဲ့ ဝယ်သွားတဲ့ လက်ဆောင်ဟာ သူများနိုင်ငံမှာ မျက်နှာမငယ်ရတာကို ကောင်းကောင်း တွေ့ရပါတယ်..။ အဲဒါကို ဈေးကွက် ရှာဖွေ ထိုးဖေါက် ပြီး ရောင်းတန်းဝင်အောင် လုပ်ဖို့ပါပဲ..။
FDI ဆိုလိုက်ရင် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး ဆိုပြီး ကြောက်ကန် ကန် နေကြတယ်..။ တားလို့ မရတော့ပါဘူး..။ ရောက်လာတော့မှာပါ..။ ကိုယ်ကလဲ သူများ နယ်ထဲမှာ သွားပြီး ရင်းနှီးလို့ရတယ် ဆိုတာ မေ့လို့မဖြစ်ပါဘူး..။ အာဆီယံ ရဲ့ သဘောတူညီချက်က ခွင့်ပြုထားပါတယ်..။ သွားနိုင်ပါတယ်..။ ပြိုင်နိုင်ပါတယ်..။ ရောင်းနိုင်ပါတယ်..။ ထိုးဖောက်နိုင်ပါတယ်..။ ဒါမှသာ အာဆီယံအတွင်းမှာ Cross Culture ဆိုတာ အသက်ဝင်လာပြီး အဓိပ္ပါယ် ရှိလာမှာပါ.။
ကုန်ချော တို့ Value added တို့ပြောလိုက်ရင် မျက်စိထဲမှာ စက်ရုံကြီးတွေ အလုပ်ရုံကြီးတွေချည်းပဲ ပြေးမြင်မိတတ်ကြတယ်..။ တကယ်တော့ လက်နဲ့ လုပ်တဲ့ လက်မှု ပစ္စည်း Handmade တို့ .. သဘာဝ ရေမြေကို အသုံးချပြီး စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Organic food တို့ကသာ ဈေးကွက်မှာ အသာစီးရနိုင်တာပါ..။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံကလူတွေဟာ သဘာဝနဲ့ နီးစပ်နိုင်သမျှ နီးစပ်အောင် ပြန်သွားနေကြပါပြီ…။ ကျွန်တော်တို့က နဂိုကတည်းက နီးစပ်ပြီးသားပါ..။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Strength ပါ .. အားသာချက်ပါ..။
ဒီအားသာချက် ကို အစိုးရသစ်က ပြဋ္ဌာန်းပေးမယ့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနဲ့ ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ ပေါ်လစီသစ် တွေနဲ့ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းပြီး ထုတ်လုပ်ကြမယ်..။ လှလှပပ ထုပ်ပိုးကြမယ်. ဈေးကွက်ရှာကြမယ်..။ တင်ပို့ကြမယ် ..။ စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲကြမယ်.. မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ကြမယ် ဆိုရင် အသေးစားနဲ့ အလတ်စား လုပ်ငန်းရှင်တွေ ဒိထက် ပိုပြီးကြွယ်ဝ လာကြမှာ မလွဲပါဘူး ..။
Thein Kyaw Soe says:
​ကောင်းလိုက်​တဲ့ comment ​တွေ​ဗျာ
အားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Yesterday at 7:38am · Edited ·
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တပ်မတော်နဲ့ တူတူတွဲလုပ်တာ မြင်ချင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်မှာ အခု အင်အားအကြီးဆုံးဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တပ်မတော် ဖြစ်သွားပါပြီ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုး မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အဲဒါကို အားလုံး နားလည်ကြတယ် ထင်ပါတယ်။
ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာလဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပြတ် နိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး လို့ ရင်းနှီးသူ အများစုက ထင်ပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ သူပြောခဲ့ သလို တောင်ပြိုကမ်းပြို နိုင်မယ်လို့ တလျောက်လုံး ပြန်ငြင်းခဲ့ ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ နိုင်ငံရေး အရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှိနေသရွေ့ သူ့ကို ယှဉ်နိုင်သူ မရှိဘူး လို့ ယုံကြည်လို့ပါ။ တပ်မတော် က လဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ နိုင်ငံရေး ပြိုင်ဖက်မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးလဲ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ တပ်မတော် မှာ အား ရှိပါတယ်။ ရာစုနှစ်တဝက်ကျော် အခွင့်ထူး ရခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လို့ သူ့ရဲ့ ကြွမ်းကျင်မှု၊ စည်းလုံးမှု၊ ကုန်ထုတ် စွမ်းအားပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေ ပိုင်ဆိုင်မှု တွေဟာ ယှဉ်နိုင်သူ မရှိပါဘူး။ အဲဒါတွေဟာ သေနတ်ရှိတာ၊ လက်ရှိ စီးပွားရေး ကို လွှမ်းမိုးထားနိုင်တာ၊ ဝန်ထမ်းလောက အရေးကြီးတဲ့ နေရာတိုင်းကို တပ်မှုးဟောင်းတွေ နေရာ ယူထားတာ ထက်ပိုတဲ့ အားပါ။
အဲသလို နှစ်ပေါင်းများစွာ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ စံနစ်တခု၊ တပ်မတော်ရဲ့ အင်အား တခုကို နေ့ချင်း ညချင်း ဆွဲနှုတ်ဖို့ ကြိုးစားရင်၊ နှုတ်လို့ ရရင်တောင်မှ ကျန်ခဲ့တဲ့ ပျက်စီးမှုက အကြီးအကျယ်ပါ။ နှုတ်တဲ့သူလဲ မသက်မသာ ပြန်ခံရမှာပါ။
တဘက်ကပြန်ကြည့်ရင်လဲ တပ်မတော်အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နိင်ငံရေး အင်အားကို ဆွဲနှုတ်ဖို့ ထပ်မကြိုး စားသင့်တော့ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၇ နှစ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကလေး ပေါင်းများစွာက ပုံစံမျိုးစုံ နဲ့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ နိုင်တယ် ထင်ရပေမဲ့ တကဲ့ ရလာဘ်ကမြန်မာနိုင်ငံပြီး ဘိတ်ချီး ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီ ဘိတ်ချီး ဆိုတဲ့ စကားလုံး သေးသေးလေးရဲ့ နောက်မှာ နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံ သားတွေရဲ့ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စာရိတ္တ အစစ အရာရာ နိမ့်ကျ ဆုံးရှုံးခဲ့တာပါ။ ဒါကို ကျွန်တော်နဲ့ စကားပြောဖူးတဲ့ တပ်မတော် ဘက်က သူတွေလဲ ကောင်းကာင်း လက်ခံပါတယ်။ ငြင်းစရာ ရှိတာက သူ့ကြောင့် ကိုယ့်ကြောင့် ဆိုတာပါ၊ နိမ့်ပါး ခဲ့ တာကတော့ ငြင်း မရ ဘူးလေ။
အရာအများစုရဲ့ ဖြေရှင်းချက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တပ်မတော်တို့ တူတူ ပေါင်းပြီး ခရီးဆက်ကြဖို့ပါ။ ခုအချိန်မှာ တပ်မတော် ထိပ်သီးတွေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တဖက်အားကို တဖက် အသိအမှတ်ပြုပြီး အပြတ်ဖြုတ်ဖို့ မကြိုးစားဘဲ တွဲ လုပ်ဖို့ ကြိုးစား ကြမယ်ဆိုရင် သူတို့ ၂ ဘက်လုံးတင်မက နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသား အားလုံး အကျိုးခံစား ရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
တပ်မတော်အနေနဲ့ လဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို သမ္မတ ဖြစ်ခွင့် လမ်းဖယ်ပေးလိုက်ပါ။ Weak Government တခု ဖြစ်တဲ့ အတွက် နိုင်ငံမှာရော၊ တပ်မတော်မှာပါ အကျိုးယုတ်ဖို့ဘဲ ရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အားကို ဆွဲနှုတ်ဖို့ ထပ်မကြိုးစား သင့်တော့ပါ။ သူ့ရဲ့ အင်အား၊ သူ့ရဲ့ အရည်အချင်း ကို လက်ခံပေးလိုက်ကြပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို သမ္မတ ဖြစ်ခွင့် ပေးလိုက်ပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကလဲ တပ်မတော်ရဲ့ အကျိုးစီးပွားနဲ့ နိုင်ငံရေး အမြင်တွေကို ညှိနှိုင်း လက်ခံပေးလိုက်ပါ။ ကျွန်တော့ရဲ့ ပုဂလ္လိဂ အမြင်မှာ တပ်ကို စေတနာ အရှိဆုံးဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါ။
ရွေးကောက်ပွဲ ဒီရေချိန် အလွန်မှာ ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ စကား တည်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ တပ်မတော်ကို ကမ်းလှမ်းချက်တွေဟာ ပါးစပ်ဖျားက လာတာ မဟုတ်ဘဲ တကဲ့ ရည်ရွယ်ချက် စေတနာ နဲ့ ပြောတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တပ်မတော့် တူတူတွဲ နိုင်မှ နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသား အားလုံး တိုးတက်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ တပ် မတော် ကို ချော့နေရတာကို က မဟုတ်တာ။
ခေးတွေ ဆိုတော့ ခက်သားလားး
တပ်မတော်ကို… ယူအန်ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ထဲထည့်ပေးလိုက်နိုင်ရင်… ပိုပိုကောင်းသွားမှာပါ..။
လစာလည်းကောင်း.. အခွင့်အရေးလည်းကောင်း.. စစ်သားတွေလည်းဂုဏ်သိက္ခာအပြည့်…။
ဒေါ်စု ဒါကိုလုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်..။ သူလုပ်ပေးလို့ရတယ်..။
သူ့မိတ်ဆွေကြီး.. ယူအက်စ်စိနိတ်တာ ..လက်နက်စစ်ရေးကော်မတီဥက္ကဌ မက်ခ်ကိန်းက ပြောဖူးတယ်..။
အဆုံးတနေ့ကတော့.. ညူကလီးယားလျှပ်စစ်ထုတ် နိုင်ငံကြီးဆီပေါ့…။
ခုပဲ လာရှိုးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ စက်ိုင်းပျက်​က ခဏခဏ ပြန်​လွှင့်​​နေတာ ဘာသ​ဘောလဲမသိ ။ ကျ​နော်​နဲ့ သိတဲ့သူ​တွေက​တော့ဖြင့်​ အ​ပြောင်​အပျက်​ စ,​နောက်​ စရာ တစ်​ခုလိုသ​ဘောထား​နေတာပဲ​တွေရတယ်​ ။ အများစု စိတ်​၀င်​စား​နေတာက UEC ​ကျေညာချက်​ကိုသာ စိတ်​၀င်​တစားရှိတာ ဒီည ၉ နာရီ ​ကျေညာချက်​အရ ဒီချုပ်​က အမျိုးသားလွှတ်​​တော်​ ၁၁၁ နဲ့ ပြည်​သူ့ လွှ​တ်​​တော်​ ၂၁၇ ရှိသွားပြီ ဖြစ်​လို့ အစိုးရဖွဲ့နိုင်​ဖို့ တစ်​​ယောက်​ပဲ လို​တော့တယ်​လို7Days က သတင်းတက်​လာပါတယ်​ ။ ​နောက်​ ဘာ​တွေဆက်​ကြံစည်​မလဲဆိုတာက​တော့ ​ငွေ​ရောင်​ပိတ်​ကား​ပေါ်မှာ​မျှော်​ ………..
သူများ အဘ တို့ က Friday the 13th ကို တမင်စောင့်နေတာပါတဲ့။
အဲဒီ နေ့ရဲ့ စကားစု ကို လဲ သူတို့ သိလို့ပါတဲ့။ အမှတ်တရပေါ့။ :-))))
ဘာပြောပြော အသုံးမကျတာတော့ အသုံးမကျတာပါပဲ….
ဒီမနက် ပို့စ်တွေ ဖတ်မိတယ်။ တစ်ချို့က (အထူးသဖြင့် လက်ရှိအစိုးရကို ထောက်ခံတဲ့သူတွေက) ပြောတယ်။ အနုပညာရှင်တွေ ကြောင့်နိုင်တာတဲ့။ အနုပညာရှင်တွေက ထွက်ပြောတော့ ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ ပြည်သူတွေက ထွက်လာပြီး မဲပေးလို့ တောင်ပြိုကမ်းပြို နိုင်တာတဲ့။ ဒါက အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ မှန်တယ်။ အကုန်လုံး မမှန်ဘူး။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရင် (တစ်ခါက ရေးဖူးတဲ့) logical fallacy တစ်ခုသာ ဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့်နိုင်သလဲလို့ ကိုယ့်ဘာကိုယ် စဉ်းစားကြည့်တယ်။ အချိန်လေးရသလောက်၊ ဥာဏ်လေး မီသလောက်ပေါ့။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လောကမှာ health system strengthening လုပ်တဲ့အခါ မဖြစ်မနေဆွေးနေးရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ရှိတယ်။ အဲဒါ brain drain ပဲ။ healthcare workforce planning အောက်မှာပါတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပါ။ (အဲဒီ စာတမ်းနဲ့ ကျွန်တော် မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ ယူခဲ့ပါတယ်။) brain drain ဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲလို့ ရှင်းပြတဲ့နည်းတွေထဲမှာ အသုံးများတာက push and pull factors တွေပဲ။ မြန်မာလိုပြောရင်တွေ တိုင်းပြည်ထဲက တွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ အခြင်းအရာတွေနဲ့ တစ်ခြားနိုင်ငံက ဆွဲဆောင်နေတဲ့ အရာတွေပါ။ အဲဒီ concept ကို အခြေခံပြီး NLD ဘာကြောင့်နိုင်တာလဲလို့ တွေးကြည့်တယ်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးက ရလာတဲ့ အသိတစ်ချို့နဲ့ လတ်တလော ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို ရှုမြင်ကြည့်မိတယ် ဆိုပါစို့။
တွန်းအား (push factors) က များနေမလားလို့တောင် တွေးမိတယ်။ တွန်းအားဆိုတာ မဲထည့်တဲ့သူတွေကို USDP ကိုမထည့်ဘဲ တစ်ဖက်ပါတီဘက်ကို တွန်းထည့်လိုက်တဲ့အရာတွေကို ဆိုလိုတာပါ။ ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့ လူအများစုဟာ NLD ကို ခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင် ပါတီလို့ ထင်ပြီး မဲထည့်တာ မဟုတ်ဘူး။ လက်ရှိအာဏာရပါတီကို စိတ်ကုန်နေလို့ ထည့်တာ အများစုပါ။ စိတ်ကုန်ခဲ့တာ အခုမှ မဟုတ်ဘူး။ နှစ်ရှည်လများ ခါးစည်းခံခဲ့ရတာဆိုတော့ ဒီခံစားချက်တွေက ရင်ထဲမှာ အခြေတည်နေတာ ကြာပြီ။ ဒါတွေက ရွေးကောက်ပွဲ ရောက်တော့ long-term push factors တွေဖြစ်လာတယ်။ (အဲဒါတွေကိုတော့ အားလုံးသိပြီးဖြစ်လို့ မရေးတော့ဘူး။) ဒီကြားထဲ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ကာလမှာ မလုပ်ထိုက်တာတွေ ထလုပ်မိတော့ ပိုဆိုးတယ်။ immediate push factors တွေဆိုပါစို့။ အဲဒါတွေကို ဥပမာ အနည်းငယ် ရေးပါမယ်။
(၁) မဲစာရင်း မမှန်တဲ့ကိစ္စ – မဲစာရင်းက သုံးခါလောက် ထုတ်တယ်။ တစ်ခါထုတ်တိုင်း တစ်ခါ ပိုကောင်းလာတယ် ဖြစ်ရမှာ။ ဒါပေမယ့် အဲလို မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ (ဘာကြောင့်ဆက်မှားနေသလဲ UEC က အသိဆုံးဖြစ်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ရမ်းသမ်း တွေးလို့ပဲ ရတယ်။ ဒါတွေထားပါ) တမင်မှားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မလုပ်တတ်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆက်ခါဆက်ခါ မှားတော့ လူတွေက တင်းလာတယ်။ တင်းလာပြီးတော့ မဲစာရင်းလေးတောင် မှန် အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ သူတွေကို ငါတို့က ဘာကိစ္စ ဆက်အုပ်ချုပ်ခိုင်းရမှာတုန်းတွေ ဖြစ်ကုန်ရော။
(၂) နိုင်ငံခြားက ကြိုတင်မဲတွေ အဆင်မပြေဘူး။ အုတ်အော် သောင်းနင်းပဲ။ အဲဒီတော့ ပြည်တွင်းက သူတွေကလည်း ကြိုတင်မဲတွေက စိတ်မချရဘူး။ ငါတို့ ထည့်မှ ဖြစ်မယ် ဖြစ်ကုန်ပြန်ရော။
(၃) မဲဆွယ်ကာလမှာ NLD ကို အဆင်မပြေဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့ကိစ္စ။ ကချင်မနောကွင်းမှာ ပေးမလုပ်တာတို့၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်တို့ ကားကို တားထားတာတို့၊ ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ ပေးမလုပ်တာတို့ဟာ လူထုကို ဆွပေးသလို ဖြစ်တယ်။ မတရားတာကို ဘယ်သူမှ မကြိုက်ဘူး။ အတန်းပညာတတ်သည် ဖြစ်စေ၊ မတတ်သည်ဖြစ်စေ မတရားမှုကို လူတိုင်း ခံစားနားလည်တယ်။ (သွားလိမ်လို့ မရဘူး) အဲဒီတော့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ လုပ်ရင်တောင် မလာဖြစ်မယ့် သူတစ်ချို့က ဒင်းတို့ ဒီလောက်ယုတ်တာ။ ငါတို့တော့ မဖြစ်ဖြစ်အောင် သွားမယ်ဆိုပြီး သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့ဦးစေတီကို ပေါက်ချလာကြရော။ သွားမဆွထားရင် ဒီလောက် ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်။
(၄) ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီနဲ့ တစ်ချို့တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်တွေက ပြောတဲ့ တစ်ချို့မဲဆွယ်ချက်တွေဟာ (အားလုံးကို မဆိုလိုပါ) လူထုအသံကို ရောင်ပြန်မဟပ်ဘူး။ လွဲနေတယ်။ ဖုန်းကိစ္စ ပြောတယ်။ သူတို့ဘက်က ပြောရင် ဖုန်းဈေးကျလာတာ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် လူထုဘက်က တွေးထားတာက ဒင်းတို့က နဂိုကတည်းက မဖြစ်သင့်တဲ့ ဈေးနဲ့ ရောင်းလာတယ်။ အခုမှ ဈေးကျတာ ငါတို့ ဘာလို့ ကျေးဇူးတင်ရမယ်လဲ။ သူတို့ဘက်က ပြောရင် မြစ်ဆုံကို ရပ်ပေးတာငါတို့။ ငါတို့ကို ကျေးဇူးတင်။ ဒါပေမယ့် လူထုတွေးထားတာက မြစ်ဆုံကို လုပ်တာလည်း မင်းတို့ပဲ၊ အစောကြီးကတည်းက မလုပ်သင့်တာကို လုပ်ခဲ့ပြီး ရပ်လိုက်တော့မှာ ငါတို့က ဘာကို ကျေးဇူးတင်ရမှာတုန်း ဖြစ်ကုန်ရော။ ဒီကြားထဲ အိုဘားမား ၂ ခါလာတော့ ၂ ခါ အနမ်းခံရတာပေါ့တို့ ဘာတို့လျှောက်ပြောတော့ လူတွေက ငတုံးမှ မဟုတ်တာ။ (What Susie says about Sally, saysalot more about Susie than it says about Sally. ဆိုတဲ့ စကားလည်း ရှိတယ်။) အဲဒီတော့ သွားပြီပေါ့။ အပြောခံရတဲ့သူကို အထင်မသေးဘဲ ပြောတဲ့သူကို အထင်သေးတာပေါ့။ အဲဒီလို ကိုယ်ပြောတာနဲ့ လူထုခံစားချက်နဲ့က သဟဇာတ မဖြစ်တော့ ကိုယ့်ကို ဘယ်ကြည်တော့မလဲ။ ကိုယ့်ဘက်ကို ဘယ်လာတော့မလဲ။ တစ်ဖက်ကို တွန်းထုတ်သလို ဖြစ်သွားတာပေါ့။
(၅) သတင်းစာနဲ့ အွန်လိုင်း အကောင့်တုတွေက ဖားချက်၊ ဖာချက်၊ အပုပ်ချချက်တွေဟာလည်းပဲ တွန်းအားတွေ ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ ရေးတာတွေက လွန်ကျူးတော့၊ တစ်ဖက်စောင်းနင်းဖြစ်တော့၊ လူတွေက ပြန်ရေးရင်း၊ ပြန်တုံ့ပြန်ရင်းနဲ့ ဘယ်ဘက်မှ မပါတဲ့သူတွေကတောင် NLD ဘက်သား ဖြစ်ကုန်ရော။
(၆) ကျွန်တော်သာ အစိုးရဘက်က လူသာဆိုရင် ဖမ်းထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခင် ကပ်ရပ်မှာ ကျောင်းသားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်မယ်။ လူထုဟာ အနိုင်ကျင့်တာကို မကြိုက်ဘူး။ ခံရတဲ့သူဘက်က နာပေးတတ်တဲ့ သဘောရှိတယ်။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကို မုန်းခဲ့တဲ့ သူတွေကတောင် ဗိုလ်ခင်ညွန့် အကျယ်ချုပ်ဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်လာတော့ ၀ိုင်းသနားကြတယ်။ (ကျွန်တော်လည်း အဲဒီတုန်းက ရုတ်တရက် သနားသလိုလို ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ရေကြည်အိုင်မှာ နှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေ အကြောင်းတွေးလိုက်မှ အဲဒီသနားစိတ် လျော့သွားတယ်။) အဲဒီလိုပဲ။ ကျောင်းသားတွေကို ဖမ်းတော့ ဒီမိုကရေစီပြောင်းချင်တယ်လို့ ပြောနေတဲ့ အစိုးရဟာ ဒီမိုကရေစီတောင်းနေတဲ့သူတွေကို ဖမ်းတယ်တော့ဆိုပြီး ဒီမိုကရေစီ လိုချင်တဲ့သူတွေက ဘယ်ကြိုက်မလဲ။ အဖမ်းခံရတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို သနားတာပေါ့။ ဒီကြားထဲ ကာချုပ်ကြီး ပုံတင်လို့ ဖေ့ဘုတ်သုံးစွဲသူတွေကို ထပ်ဖမ်းတော့ ၀ိုင်းပြီး အစိုးရကို စိတ်ဆိုးတာပေါ့။ စိတ်ဆိုးတော့ USDP ဘက်ကို ဘယ်လာတော့မလဲ။ တစ်ဖက်ကို ယိုင်ပြီပေါ့။
(၇) အောက်လမ်းနည်းနဲ့ မဲဆွယ်တဲ့ ကိစ္စ။ လူတွေက ဒါကို မကြိုက်ဘူး။ ဥပမာ အနှေးယာဉ် ဆရာတွေကိုပဲ ကြည့်။ USDP က မြို့နယ် တစ်ချို့မှာ ပိုက်ဆံပေးပြီး ဆိုက်ကားမှာ အလံထောင်ခိုင်းတယ်။ ဒါကို သိတော့ ကျန်တဲ့ အနှေးယာဉ်လုပ်သားတွေက ငါတို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းတော့ ထိလာပြီ။ ပိုက်ဆံမရတာ ကိစ္စမရှိဘူး။ ပြည်သူ့ တံတွေးခွက်မှာတော့ မှောက်လျက်အမျောမခံဘူး၊ နာမည် အပျက်မခံနိုင်ဘူး ဆိုပြီး အုံလိုက်ကျင်းလိုက် NLD အလံတွေ နဲ့ ထွက်ချလာကြရော။ သူတို့နဲ့အတူ ဆိုင်ကယ်တွေ၊ ကားပိုင်ရှင်တွေလည်း ထွက်ချလာကြရော။ အဲမှာ ၀က်ဝက်ကွဲကုန်ရော။
ဆွဲအားတွေအကြောင်း (pull factors အကြောင်း) ပြောရအောင်။ အကုန်လုံး စုံအောင် ရေးနိုင်မှာ မဟုတ်လို့ နည်းနည်းပဲ ရေးပါရစေ။
(၁) အရေးအကြီးဆုံးကတော့ အမေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲ။ ပြည်သူက သူ့ကို ဘယ်လိုမြင်ထားမလဲလို့ တွေးကြည့်ရအောင်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမီး လို့ မြင်ထားတယ်။ အထူးသဖြင့် အသက်ကြီးပိုင်း တောသူတောင်သားတွေဟာ NLD ကို မဲထည့်ဖို့ ဒီတစ်ချက်နဲ့တင် လုံလောက်တယ်။ လေထိပြီး အိပ်ရာထဲ လဲနေတဲ့ အသက် ၉၀ နားကပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်အဖွား NLD ကို မဲထည့်တာလည်း ဒီအချက်က အဓိကပဲ။
အနိုင်ကျင့်ခံရသူလို့ မြင်တယ်။ နိုင်ငံရေးကို သိပ်မသိတဲ့ သူတွေတောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အကျယ်ချုပ်နဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ချုပ်နှောင်ခံထားရတယ်ဆိုတာ သိတယ်။ အဲဒီတော့ သူ့ကို သနားစိတ်ရှိတယ်။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကို လူမျိုးကိုတောင် သနားခဲ့တဲ့လူမျိုးဟာ မိသားစုနဲ့ ဝေးကွာပြီး အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ အမေစုကိုဆိုရင် ဘယ်လောက် သနားမလဲ စဉ်းစားလို့ရတယ်။ သနားရင် ၀ိုင်းရံချင်တဲ့စိတ် ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးမှာရှိတယ်။
အမေစုကို အရည်အချင်းရှိသူလို့ မြင်ထားတယ်။ မြင်လည်း မြင်စရာကောင်းတယ်။ အမေစု ရထားတဲ့ဘွဲ့တွေ တစ်သီ တစ်သန်းကြီးရှိတယ်။ ပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း ဘယ်သူမှ မကြားဖူးတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေက မဟုတ်ဘူး။ အမေစုနိုင်ငံခြားသွားတော့ ဘယ်လိုကြိုဆို ဧည့်ခံကြလဲဆိုတာကိုလည်း လူထုက မြင်ထားတယ်။ အဲဒီတော့ အထင်ကြီးလေးစားကြတယ်။ အားကိုးကြတယ်။ အမေသာ ရွေးကောက်ခံရရင် တရုတ်ငယ်ကျွန်ဘ၀က လွတ်ပြီး နိုင်ငံတကာမှာ လူရာသွင်းခံရမယ်ဆိုတာ သိတယ်။
လူထုက အမေစုကို ချစ်စရာကောင်းသူလို့ မြင်တယ်။ အမေစုဟာ လူတွေကို လူလို ဆက်ဆံတယ်။ လူပီသအောင် နေတယ်။ လူတွေကို စကားပြောရင် သူတို့ ရင်ထဲမှာ ဖြစ်နေတာတွေ ရောင်ပြန်ဟပ်အောင် ပြောနိုင်တယ်။ ကိုယ်ပြောချင်နေတာတွေကို သူက ကိုယ့်ကိုယ်စား ပြောပေးနေတယ်လို့ ထင်အောင် ပြောနိုင်တယ်။ သူများရေးထားတဲ့ စာတွေကို ဖတ်တာ မဟုတ်ဘူး။။ ဒါ့အပြင် ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ကာလမှာ တက်လာတဲ့ ပုံတွေကလည်း တစ်အားကောင်းတယ်။ ရန်ရန်ချမ်းတင်တဲ့ အနီပင်လယ်ထဲက အ၀ါရောင်လေးဝတ်ပြီး ပြည်သူနဲ့ တစ်သားတည်း ထိုင်နေတဲ့ ပုံတို့၊ ခပ်နွမ်းနွမ်းနဲ့ ညစ်ပေနေတဲ့ လယ်သမကို ဖက်ထားတဲ့ ပုံတို့၊ ၀ိုင်းနမ်းကြတဲ့ပုံတို့၊ လမ်းဘေးက လှမ်းပေးတဲ့ ရေခဲမုန့်ကို စားနေတဲ့ ပုံတို့ (အဲဒီ ရေခဲမုန့်သည်ဟာ တစ်သက်လုံး အမေစု မှ အမေစု မဖြစ်ရင် ကြိုက်သလိုလာပြော)၊ ပြည်သူနဲ့ တူတူ သီချင်းဆိုနေတဲ့ ဗီဒီယိုတို့ဟာ ပြည်သူ့ရင်ဘတ်ထဲကို ရောက်တယ်။ (USDP မှာတော့ အဲလိုပုံတွေ ရှားတယ်)။ ပြီးတော့ အမေစုဟာ ကိုယ့်လူထုနဲ့ ပြောရင် ချိုချိုသာသာပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ (ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့ ၅၄ ခြံထဲမှာ အနုပညာရှင်တွေကို ပြောတဲ့ နှုတ်ဆက်စကားဗီဒီယိုကို ကြည့်ပြီးပြီလား။ ဗေလုဝကိုတောင် စစ်သူကြီး မဟာဗေလုဝတဲ့။ နောက်နောင်ပြောင်ပြောင်နဲ့ ဘာပကာသနမှ မပါဘူး။ တစ်အားချစ်ဖို့ကောင်းတယ်)။ ဒါပေမယ့် အမေက နိုင်ငံခြားသွားရင် ခပ်တည်တည်၊ ခပ်မတ်မတ်ပဲ။ body language က အစ ပြောင်းသွားတယ်။ မာန်ရှိသွားတယ်။ ဟိုဖက်က လူတွေက အဲလို မဟုတ်ဘူး။ ပြောင်းပြန်။ ကိုယ်နိုင်ငံထဲ ဆိုရင် ငေါက်ချင်တယ်။ ဟောက်ချင်တယ်။ ခြိမ်းခြောက်ချင်တယ်။ ပါးတောင် ရိုက်ချင်တယ်။ အခမ်းအနားလုပ်ရင် သူများနဲ့ မတူတဲ့ ထိုင်ခုံ အကောင်းစားနဲ့မှ ထိုင်ချင်တယ်။။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာသာ အဲလိုကျယ်နေတာ။ နိုင်ငံခြားသွားရင်တော့ ကုပ်ကုပ်ကုပ်ကုပ်နဲ့။ အသံကလည်း မကျယ်တော့ဘူး။ ဘယ်သူမှ တခမ်းတနား မကြိုလို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရထားနဲ့ သွားရတာတောင် public transport လေ့လာချင်လို့ လုပ်သေးတယ်။ (လေ့လာချင်ရင် ဆူးလေလာပြီး အင်းစိန်အထိ ၄၅ ဘတ်စ် စီးကြည့်ပေါ့။ သူများနိုင်ငံကျမှ လေ့လာစရာလိုသလား) ဒါတွေကို ငတုံးငအ မဟုတ်တဲ့ လူထုက မြင်တာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလို နှိုင်းယှဉ်မြင်တတ်တဲ့ သူတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ အဖြူနဲ့ အမည်းဟာ ထင်းနေတာပေါ့ဗျာ။ compare လုပ်တော့ contrast ဖြစ်နေတာပေါ့။ အဲဒီ အမည်းနဲ့ ယှဉ်တော့ လူတွေက အဖြူကို ချစ်တာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တေ်ာပြောတာ ဘိုစကားလုံးတွေ များနေလို့ ရှေးရိုးစဉ်လာမြန်မာ့စကားနဲ့ ပြောရင် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာပေါ့ဗျာ။ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဆိုတာ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ အမှန်တရားအတွက် ရပ်တည်မှု၊ အရည်အချင်းပေါ့ဗျာ။ အဲဒါတွေနဲ့ ပြည့်စုံတယ်လို့ လူထုက ယူဆတော့ အားကိုးချစ်နဲ့ ချစ်ကြတာပေါ့။
(၂) အမေစု အပြင် တစ်ခြား ရွေးထားတဲ့ အမတ်တွေကလည်း လူထုက လက်ခံတဲ့သူတွေ အများစုဖြစ်တယ်။ မန္တလေးက ဆရာဦးသန်းဝင်းတို့၊ အမရပူရက ဆရာဦးဇော်မြင့်မောင်တို့လိုလူတွေကြည့်။ ရပ်ကွက်က မြို့က လက်ခံပြီးသား လူတွေ။ အငယ်ပိုင်းကဆိုရင်လည်း ဒိတ်ဒိတ်ကြဲမဟုတ်ရင်တောင် ဘွဲ့ရ ပညာတတ်တွေ။ ဒေသနဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်တဲ့သူတွေ။ ဒေသက ဘူဇွာလို့ မခံယူထားတဲ့ သူတွေ။
(၃) အနုပညာရှင်တွေရဲ့အား။ ဒီအားက တစ်အားကြီးတယ်။ ဒါကလည်း အမေ့အမြော်အမြင်တွေ ပါတယ်။ အမေဟာ အချုပ်ကလွတ်ပြီး သိပ်မကြာဘူး။ အနုပညာရှင်တွေကို ၅၄ မှာ ခေါ်တွေ့တယ်။ သီချင်း၊ ရုပ်ရှင် စသဖြင့် စုံအောင်တွေ့တယ်။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီတော့မှ ရိပ်မိတယ်။ အမေ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ဖို့ စဉ်းစားနေပြီလို့။ အဲဒီကတည်းက ကြိုတွေးထားတာ။ ဒီအနုပညာရှင်တွေဟာ အလကား ဆိုပေးတာ။ သူတို့ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရတယ်။
(၄) လူလတ်တန်းစား ပညာတတ်တွေရဲ့ ဆွဲအား။ သူတို့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကလည်း ဒီအောင်ပွဲမှာ အရေးပါခဲ့တယ်။ သူတို့က တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ပါလာတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာ သုံးပြီး လုပ်ကြတယ်။ ဘာကြောင့် ဘယ်ပါတီကို မဲထည့်သင့်တယ်လို့ ရေးတဲ့သူတွေက ရေးတယ်။ အဲဒါကို ၀ိုင်းရှယ်ကြတယ်။ NLD ကို မဲထည့်မယ်လို့ စတေးတပ်စ်တင်တဲ့သူက တင်တယ်။ ပရိုဖိုင် ချိန်းတဲ့သူကချိန်းတယ်။ အဲဒါတွေဟာ ကူးစက်တဲ့သဘောရှိတယ်။ ripple effect တွေ ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီလို တက်ကြွခဲ့တဲ့ သူတွေကို ကျေးဇူးတင်မိတယ်။ ဖေ့ဘုတ်ထဲမှာတွေ့နေတဲ့ အကောင့်တစ်ချို့ကို ကျွန်တော်တစ်အားလေးစားမိတယ်။ သူတို့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက သက်သက်။ နိုင်ငံရေးသမားလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး သူတို့ယုံကြည်တဲ့ အမှန်တရားကို အခြေခံပြီး တိုင်းပြည်အတွက် တက်ကြွနေတဲ့ သူတွေ။ အကောင့်အစစ်နဲ့ မကြောက်မရွံ့ လှုံဆော်စည်းရုံးခဲ့သူတွေ။ သူတို့ရဲ့ စကားတွေဟာ အတိုင်းအတာတစ်ခု တာသွားခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ထက် ငယ်တဲ့ သူတွေတောင်ပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေဟာ middle class ကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိတယ်။ ကိုယ့်အချင်းချင်းပြောတာကို ယုံတဲ့ peer effect တွေလည်း ပါတယ်။
(၅) နောက် မဖြစ်မနေထည့်ပြောရမယ့် အချက်က နိုင်ငံခြားက ကြိုတင်မဲပေးတဲ့သူတွေ (အထူးသဖြင့်) စင်ကာပူက ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ။ သူတို့ ညအိပ်စောင့်ပြီး တန်းစီပြလိုက်တာ မြန်မာပြည်က တော်ရုံတန်ရုံလူက မနေနိုင်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ သူတို့တောင် ဒီလောက်လုပ်တာ ငါတို့လည်း မဲမထည့်လို့ မဖြစ်ချေဘူးဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးဝင်သွားတယ်။ ငိုတဲ့ပုံတို့၊ မူးလဲတဲ့ ဗီဒီယိုတို့ မြင်ရတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ လူပဲဗျာ။ ခံစားတတ်တာပေါ့။ အဲလိုမျိုးဖြစ်ရပ်တွေ တွေ့တော့ နှလုံးသားကို ကျင်စက်နဲ့ တို့ပြီး အနှိုးခံရသလို ဖြစ်တာပေါ့။ တစ်ချို့ဆို အဲဒီတော့မှ မဲစာရင်းသွားစစ်တဲ့သူကစစ် ဖြစ်ကုန်တယ်။ ဒါကို ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလောကမှာ diffusion of ideas ဒါမှမဟုတ် diffusion of innovations လို့ ခေါ်တယ်။ (ဆပ်ပြာနဲ့ လက်ဆေးဖို့၊ ခြင်ထောင်ထောင်အိပ်ဖို့၊ ကွန်ဒုံးသုံးဖို့ စသဖြင့် အမူအကျင့်ပြောင်းလဲရေး စီမံကိန်းတွေမှာ ထည့်စဉ်းစားရတဲ့ သီအိုရီတွေ ဖြစ်ပါတယ်။)
အဲဒီတော့ အချုပ်ပြောရရင် ဒီနိုင်ပွဲဟာ NLD က ဆွဲငင်အား ကောင်းလို့လည်း ပါသလို USDP က တွန်းထုတ်လိုက်လို့ တစ်ဖက်မှာ သွားရပ်ကြတာလည်း ပါတယ်။ မဲထည့်တဲ့သူတွေ မှာ အမျိုးမျိုး ရှိတယ်။ တစ်ချို့က ဘယ်ပါတီကိုထည့်မယ်ဆိုတာ သေချာပြီးသား။ တစ်ချို့က ဘယ်ပါတီလည်း ဆိုတာသိပ်မသေချာဘူး။ အဲလို လူတွေကို swing voters လို့ ခေါ်တယ်။ (swing ဆိုတာ ပန်းခြံထဲမှာ ကလေးတွေ စီးတဲ့ ဒန်း။ ဒန်းဟာ ဟိုဘက်ဒီဘက် ယိမ်းတယ်။) ဆွဲအားနဲ့ တွန်းအားတွေဟာ အဲလို swing voters တွေအပေါ်ကို သက်ရောက်မှုရှိတယ်။
ကျွန်တော်ဘာလို့ ဒီစာကို ရေးသလဲ။
ကျွန်တော်တို့ ရင်ထဲက ပါတီ အောင်နိုင်တာကို စားမြုံ့ပြန်ဖို့ထက်၊ ပေါက်ဖော်လုပ်ဖို့ထက် USDP နဲ့ တစ်ခြားပါတီတွေကို အနာဂတ်မှာ ကောင်းစေချင်လို့ ရေးတာဖြစ်တယ်။ (ဒီလိုရေးလို့ မင်းသစ္စာဖောက်ဆိုပြီး မဆဲကြနဲ့ဦးနော်။ ဆုံးအောင် ဖတ်ပေးပါဦး)။ ဒီမိုကရေစီဟာ တစ်ပါတီတည်းသွားလို့ ရတဲ့ စနစ် မဟုတ်ဘူး။ အဲလိုသွားတာဟာ အသွင်ကူးပြောင်းစမှာ (liberalization နဲ့ democratization ကာလတွေမှာ) လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်ပေမယ့် ရေရှည်မှာ ဒီမိုကရေစီ စစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ (consolidation ကာလရောက်ရင်) စိန်ခေါ်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အမေစု ရှိနေတုန်း ကိစ္စ မရှိပေမယ့် အမေစု မရှိတော့ရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ (ကျွန်တော့် တစ်ယောက်တည်း အမြင်ကတော့ အမေစု ရှိနေသရွေ့ NLD ကို စိတ်မပူဘူး။ သဘောထား ကွဲလွဲလည်း ရပါတယ်။) အမေစု မရှိရင် NLD ကို ဘယ်သူထိန်းမလဲ။ NLD အချင်းချင်း ထိန်းရမှာ ဖြစ်သလို ပြည်သူတွေက ထိန်းရလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုပဲ တစ်ခြားပါတီတွေကလည်း ထိန်းရလိမ့်မယ်။ အဲလို ထိန်းဖို့ အရည်အသွေး ပြည့်ဝတဲ့ ပါတီတွေ ဖြစ်နေဖို့ လိုတယ်။ အခုရွေးကောက်ပွဲမှာ USDP နဲ့ အခြားပါတီတွေ ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ချို့ဟာ အမှားတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါတွေကို ပြင်ရလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်မှားခဲ့တာလဲလို့ ပြောရင် ကျွန်တော့် အမြင်ပြောရရင် ၂ ချက်ကြောင့်ပဲ။ (သဘောထား ကွဲလွဲလည်း ရတယ်)
(၁) အရည်အချင်းနဲ့ တွေးမြင်နိုင်စွမ်း လိုအပ်နေသေးလို့။ အဲဒီအတွက် အရည်အချင်းဖြည့်ရမယ်။ အသက် ကြီးကြီး အဘတွေ ချည်းပဲ မဟုတ်ဘဲ သက်လက်ပိုင်း အရည်အချင်းရှိသူတွေနဲ့ အစားထိုးပြီး အရည်အသွေးမြှင့်ထားရမယ်။ အရည်အချင်းဆိုတဲ့ နေရာမှာ IQ တွင်မကဘဲ EQ ကောင်းတဲ့သူတွေလိုတယ်။ socially intelligent ဖြစ်တဲ့သူတွေ လိုတယ်။ လိုချင်တာက မဲ ပြောတဲ့စကားက ရိုက်ပေါက်ဆိုတဲ့ လူတွေကို ရှောင်ဖို့လိုတယ်။
(၂) ဒီအချက်က ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ ထင်တယ်။ စေတနာ မမှန်ခဲ့လို့။ စေတနာဟာ အတွေးကို ဖြစ်စေတယ်။ အတွေးကြောင့် လုပ်ရပ်တွေ ဖြစ်လာတယ်။ စေတနာဟာ ပင်မ ရေသောက်မြစ်။ အဲဒီလို စေတနာ မမှန်တာကို မှန်အောင်ပြင်ရမယ်။ စေတနာမမှန်တဲ့သူတွေကို စေတနာမှန်တဲ့သူတွေနဲ့ လဲရမယ်။ လူထုရဲ့ နှလုံးအိမ်ထဲရောက်အောင် သွားဖို့နည်းက တစ်လမ်းပဲ ရှိတယ်။ အဲဒါ လူထုကောင်းကျိုးကို တစ်ကယ် စိတ်ဝင်စားပြီး တစ်ကယ်လုပ်ဖို့ပဲ။ ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားက ပထမ၊ လူထုက ဒုတိယ ဆိုရင်တော့ အဲဒီနည်းဟာ အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ ဒါဟာ ၂၀၁၅ သင်ခန်းစာပဲ။ အဲလိုလူတွေကို လူထုက ချဉ်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပြီး ပြောင်းလဲရလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို လက်မခံဘဲ ငါတို့က ကိုယ်ကျိုးမဖက်ဘဲ တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးအတွက် တကယ်လုပ်လာတာကွလို့ တစ်ဖက်သက် ငြင်းနေတုန်းဆိုရင်တော့ ၂၀၂၀ ကျရင် ပိုင်ဆိုင်မှုလေး ချပြပါလို့ပဲ ပြောပါရစေ။ ဒါကို လက်ခံပြီး ပြုပြင်တော့မှသာ ရွေးကောက်ပွဲနီးတိုင်း ပိုက်ဆံပေး၊ ထမင်းကျွေးပြီး လူကြိုက်ခံချင်ယောင်ဆောင်ရတဲ့ ဘ၀က လွတ်မယ်။ လူထု တကယ်လက်ခံအောင် လုပ်ချင်ရင် လူထုတကယ် ချစ်အောင် နေရလိမ့်မယ်။ တကယ်ရိုးသားရလိမ့်မယ်။ You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time. ဆိုတဲ့ စကားကို သတိရပါ။
စာတော်တော် ရှည်နေပြီမို့ နိဂျုံးခုတ်ပါတော့မယ်။ ဒီတစ်ပွဲ ဘယ်သူတွေ ဘာကြောင့်နိုင်၊ ဘာကြောင့်ရှုံးလို့ အတိုချုံးပြောပါဆိုရင် တစ်ခွန်းတည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ “ ကံ ” ပါပဲ။
ကံ ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာ ခင်ဗျားရော ကျွန်တော်ရော သိပါတယ်။ ကံ ဆိုတာ အလုပ် ပါ။
(ပါတီအားလုံး အရည်အသွေး ပြည့်ဝပြီး စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောသော နိုင်ငံတော်ကို အမြန်ဆုံး တည်ဆောက်နိုင်ပါစေ)
Credit to Htet Nay Lin Oo